Malunga nathi-Yangzhou qiangjing iimpahla zemidlalo Co, Ltd.
• Yangzhou qiangjin iimveliso zemidlalo co., L. Yasekwa ngonyaka ka-1992, ikwidolophu yezembali nenkcubeko Jiangdu empuma yeYangzhou, ecaleni kwendlela iBeijing-Shanghai kunye nesikhululo seenqwelomoya iJiangsu Central. Inkampani iyimpahla yezokhuseleko yezemidlalo, i-badminton rackets, uyilo lwe-tennis racket, uphuhliso, ukwenziwa kwemveliso, inkonzo njengenye yamashishini anamhlanje. Ngoku igubungela indawo eyi-18, 000 yeemitha ezili-sikwere, indawo yolwakhiwo yeemitha ezili-9000 zeemitha, ineemveliso eziphambili kunye neemvavanyo zovavanyo ezingama-300. Bangaphezu kwama-300 abasebenzi, kubandakanya ama-20 abayili, amagcisa, ngaphezulu kwama-30 abantu, abantu abayi-10 banezihloko eziphezulu zomsebenzi. Inkampani yapasa isatifikethi solawulo lomgangatho lwe-ISO9001 ngonyaka ka-2004, zonke iimveliso zigqithisile kwisebe lokujonga imigangatho, yanikwa igama elidumileyo laseJiangsu, iimpawu zorhwebo ezaziwayo zaseYangzhou njalo njalo.
• Kwiminyaka edlulileyo, ukwaneliseka kwabathengi kukusukelwa kwethu ngonaphakade, "ukugqwesa, ukulandela ukugqwesa" njengeyona nto kujoliso. Iimfuneko ezingqongqo kumgangatho wemveliso: "Indawo ezintathu", "ezine azenzi." kwiimveliso ezenziwe, inkampani iphuhlise injongo engu "zero zero" "zero zero", "zero zero." Abantu baseQiangjin bahlawulelwa ukholo olululo ukuze bafumane ukuthembana kwabathengi .Ngenxa yemveliso esemagqabini, itekhnoloji entsha, inkonzo egqibeleleyo yasemva kokuthengisa ukuphumelela ukuthandwa kwamakhaya kunye namashishini, iimveliso kwilizwe lonke, ezithunyelwa kumazwe akuMbindi Merika, eEuropean Union, e-Australia, Japan, South Korea, South Asia kunye neminye imimandla kunye namazwe.
• Inkampani yethu iya kuqhubeka ukomeleza ubuchwephesha bobugcisa, ukumilisela isicwangciso-nkqubo sabasebenzi, ukusetyenziswa ngokupheleleyo koLawulo lweModeli yokuGqibeleleyo, njengakuhlala kugxile kumgangatho wemveliso, kuninzi lwabathengi, ukwenza igalelo elikhulu kuphuhliso lweshishini lezemidlalo laseTshayina .